Palau - Fiompiana anaty rano | Fiaretana haran-dranomasina
Palau - Fiompiana anaty rano
Mampivelatra ny fiompiana ahitra maharitra ao Palau
Palau sy ny federasiona mikronesia
Palau dia mpitarika manerantany amin'ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina - tamin'ny 2015, ny firenena dia nanendry ny 80% -n'ny faritra ara-toekarena natokana ho azy arovana tanteraka amin'ireo hetsika fitrandrahana. Amin'ny maha-firenena an-dranomasina azy, ny trondro sy hazan-dranomasina hafa dia tena zava-dehibe amin'ny Palauans noho ny tahan'ny fanjifana hazan-dranomasina any an-toerana (67.7kg / olona) sy ny toekarena fizahantany. Na izany aza, noho ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika, ny fihenan'ny mpanjono amoron-dranomasina ary ny fiovan'ny toetr'andro, dia hihena 25% ny jono eo an-toerana amin'ny taona 2050. Ny Palau koa izao dia manafatra manodidina ny 86% amin'ny loharanom-pahalalana avy any ivelany. Ny fihenan'ny jono dia sy ny tahan'ny fanafarana sakafo avo lenta dia nandrahona ny fiarovana ny sakafo Palau ary nitarika ny filohan'ny Palau, Tommy Remengasau, hanome lanja ny fampandrosoana ny fiompiana anaty akondro amin'ny fomba maharitra.
"Tsy afaka miantehitra tanteraka amin'ny ala i Palau raha ny amin'ny fivelomana sy ny famokarana sakafo ara-barotra" - Tommy Remengasau
Hatramin'izao dia nifantoka indrindra tamin'ny fanatsarana ny famokarana henan-java-boahary niaraka tamin'ny karazany toy ny grouper sy bitro bitro ny fampandrosoana ny zava-boahary Palauan. Na izany aza, voafaritra fa ny fitondrana tsara tantana sy ny fitaovana fanampiana ny fanapaha-kevitra hahafahan'ny fitomboan'ny fiompiana anaty rano maharitra dia tsy ampy ary manakana ny fampandrosoana indostrian'ny fiompiana maharitra.
Fampitomboana ny fahombiazan'ny famokarana sy ny sakafo
Nanomboka ny taona 2015, ny Birao Palau misahana ny harena an-dranomasina (BMR) miaraka amin'ny Ivon-toerana miompana amin'ny faribohitra nasionaly (PNAC) - fiaraha-miasa eo amin'ny Governemantan'i Palau sy ny governemanta Taiwan - dia namporisika ny famokarana sy ny fiompiana trondro bitro, amin'ny fanantenana ny fanalefahana ny tsindry hazandrano. tahiry izay nohajaina loatra noho ny safidin'ny mponina any an-toerana ny karazany. Ho fanampin'ny fanalefahana ny tsindry hazandrano bitro dia ny famoronana fivelomana anaty hazandrano bitro dia miteraka fivelomana maharitra ho an'ny Palauans ary manampy amin'ny fiarovana ara-tsakafo.
Mitahiry trondro bitro ao anaty tranom-borona vao namboarina niaraka tamin'ny fanampian'ny mponina sy talen'ny Birao misahana ny harena an-dranomasina any Palau, Leon Remengasau. Sary © Julio Camperio
Ny bitro zaza tsy ampy taona novolena ao amin'ny Ivotoerana Nasionalin'ny fiompiana anaty rano Palau mba hatolotra ireo tantsaha eo an-toerana. Sary © Julio Camperio
Ny BMR sy ny PNAC dia nanampy ny tantsaha tamin'ny alàlan'ny fananganana tranom-borona, nanome trondro bitro, sakafo, ary fanampiana ara-teknika. Ankoatr'izay, ny TNC dia nanao fikarohana vao haingana mba hanandramana ireo sakafo bitro vaovao izay tsy misy sakafo trondro. Amin'ny ankapobeny, ny sakafom-pambolena fiompiana trondro an-dranomasina dia mety mitaky fihinana trondro avo, izay mety hiteraka tsy fitokisana sy fiantraikany amin'ny tahiry dia. Ny fitsapana fihinanan-tsakafo sakafo fisakafoanana trondro tato ho ato tao amin'ny Ivotoerana Nasionalin'ny Fambolena anaty rano ao Palau dia nampiseho fitomboana sy fahombiazana raha oharina amin'ny sakafo ampiasaina ankehitriny izay namboarina ho an'ny trondro.
Fandrafetana ny toerana
Tamin'ny volana febrily 2019, ny TNC sy ny mpiara-miasa amin'ny BMR, ny Board Quality Protection Protection (EQPB), ary ny Palau Community College (PCC) dia nanomboka ny atrikasa mpiombon'antoka voalohany ho an'ny tetikasa iray hanampiana amin'ny fampandrosoana maharitra ny fiompiana anaty ranomasina amin'ny alàlan'ny fandrafetana ny velaran-tany. Amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola nomen'ny US National Aeronautics and Space Administration (NASA), ny tetik'asa mandritra ny taona maro dia ny fananganana fahaiza-manao ho an'ny sehatry ny fiompiana anaty rano maharitra, toy ny fipetrahana, fitantanana ary fanaraha-maso any Palau.
Ireo singa ilaina amin'ity tetikasa ity dia ny fampiasana ireo vokatra fandalinana ny habaka mba hanampiana amin'ny famaritana ireo faritra miompana amin'ny fiompiana anaty fampandrosoana maharitra. Ny valiny savaranonando dia misy amin'ny alàlan'ity misokatra amin'ny varavarankely vaovaofitaovana fanampiana ny fanapaha-kevitra.
Fanadihadiana momba ny santionany momba ny fiompiana trondro any Palau. Loharano: The Conservancy voajanahary
Ny varotra trondro bitro voahangy isaky ny tranom-borona dia ambany hatrany amin'ny $ 996 ka hatramin'ny $ 2,365 (Data momba ny Fijinjana ny BMR Rabbitfish hatramin'ny Mey 2020). Ny fiovana lehibe amin'ny fahaveloman'ny trondro sy ny fahasalaman'ny trondro dia vokatry ny fitantanana ny toeram-pambolena (manadio sy manamboatra harato) ary manome sakafo. Ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny toeram-piompiana efa misy dia fomba iray lehibe hanatsarana ny fivelarana sy ny taham-pitomboan'ny bitro, ary koa ny fanatsarana ny fahombiazan'ny mpamboly. Ny fomba fiasa hampihenana ny vidin'ny fikojakojana ny fambolena, toy ny fiompiana fiaraha-miasa, dia azo heverina fa hanatsara ny fahasalaman'ny trondro sy ny tombom-barotra amin'ny tantsaha.
Manampy sy mividy bitro bitro vao haingana ireo mponina ao Palau. Sary © Julio Camperio
Raha mbola eo am-panatanterahana ny asan-tany sy ny fizarana zaridaina an-dranomasina, ny tahirin-kevitra voalohany dia mampiseho ny faritra lavitra amin'ny morontsiraka izay mety indrindra amin'ny fiompiana trondro, satria ireo faritra ireo dia elanelana mifanalavitra amin'ireo toeram-ponenana mora tohina ary manana halalin'ny rano, onja ary famoahana rano. Raha jerena ny halaviran'ny lavitra avy amin'ny morontsiraka mba hahazoana antoka ny toeram-ponenana maharitra, fananana tsirairay ary ampiasaina amin'ny toeram-piompiana madinidinika ao amin'ny sakanana mitsinkafona miisa 1-5 ao Palau dia mety tsy ho azo ampiasaina ara-toekarena raha tsy ampiana vola.
Ampandraiso anjara ny vondrom-piarahamonina sy ireo mpandray anjara lehibe amin'ny dingana rehetra amin'ny firotsahana sy ny hevitra matetika
Misafidiana karazana fiompiana iray izay fantatry ny olona ao an-toerana ary manana tahiry be dia be mety be loatra
Mampiasà fitaovana spatial hamaritana toerana mety ho an'ny tranom-borona
Fantaro fa na apetraka amin'ny toerana sahaza azy aza ny famokarana tranom-borona dia tsy maintsy tanterahana tsara ary arahi-maso mba hisorohana ny fiantraikan'ny tontolo iainana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy birao misahana ny harena an-dranomasina ao Palau
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBirao miaro ny kalitaon'ny tontolo iainana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCollege Community Palau
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fiompiana trondro Koror dia mahazo bitro mihinin-jaza
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBiota dia mamoaka trondro bitro 4 volana natsangany tao anaty rano
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTetikasa BMR-ROC AP dia manatitra trondro bitro any amin'ny fanjakan'i Ngchesar
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTetikasa BMR-ROC Aquaculture dia nanao fampiroboroboana ny kolontsaina farihy Rabbitfish tany amin'ny fanjakan'i Ngchesar